Wasaaradda Qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee Puntland oo soo bandhigtay buug ay kaga hadlayso isbadalka Puntland. – Radio Daljir
Wasaaradda Qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee Puntland oo soo bandhigtay buug ay kaga hadlayso isbadalka Puntland.
Garowe, 13 -Wasaaradda qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ee Puntland ayaa soo bandhigtay buug cusub oo looga hadlayo heerka waxbarshada, caafimaadka iyo adeegyada bulsho ee Puntland.
Agaasimaha guud ee wasaaradda qorshaynta iyo xiriirka caalamiga Puntland Faysal Siciid oo isagu sharaxay waxyaabaha uu ka hadlayo buuga ayaa tilmaamay buuga inay kusoo bandhigeen arrimaha bulshada, dhaqaalaha iyo tirada shacabka Puntland.
Waxaa uu tilmaamay buuga inay kusoo bandhigeen hanaanka waxbarsho ee Puntland halka uu marayo iyo caafimaadka.
Waxaa uu sidoo kale uu tilmaamay markii ay qiimayn ay wasaaraddu ku sameeysay tiro koobka shacabka Puntland inay gaarayso tirro ahaan sadex milyan iyo sagaal boqol oo kun oo qof.
Mar uu ka hadlayay ujeedka buuga loo soosaaray ayaa waxaa uu tilmaamay muhiimadiisu inay tahay sidii ay hay’adaha samafalka ay aqoon badan uga heli lahaayeen caafimaadka, waxbarashada, ganacsiga iyo tirada shicibka Puntland.